Xogtii ugu dambeesay diyaaradii maanta ku burburtay Pakistan - BANDHIGA
Xogtii ugu dambeesay diyaaradii maanta ku burburtay Pakistan
Dayuurad ay leedahay Pakistan International Airlines (PIA) oo kasoo duushay Lahore una socotey Karachi ayaa ku burburtay meel u dhow Garoonka Karachi, taasoo ay siddey 99 rakaab ah.
Dayuuraddan oo ku burburtay xaafad dadwayne oo la yiraahdo Model Colony oo ku taalla afaafka magaalada, isla markaana 2 KM u jirta Garoonka Ali Jinnah International Airport ayaa waxaa iminka ku sugan gaadiidka birmadka.
Dayuuraddan ayaa samaynaysey duullimaadka PK 8303 waxaana saarnaa 99 rakaab ah iyo 8 shaqaale ah, iyada oo ahayd nooca Airbus A320 oo 15-sano shaqayneysey. Waxaa la sheegay inay ka badbaadee 40 qofi.
Webka Dawn ayaa qoraya in Wasiirka Dowladda Degaanka Sindh ee Syed Nasir Hussain Shah uu goobtan u dalbay guutada Dab-damiska iyo kooxaha wax samata bixiya.
Waxaa sidoo kale goobta gaarey Ciidamada Xoogga Pakistan, kuwooda jawaabaha deg degga ah bixiya, si ay gurmad u sameeyaan.
Afhayeen u hadlay PIA ayaa sheegay inaan weli la caddayn karin waxa sababay shilkan.
By : Press room Tags: Xogtii ugu dambeesay Rakaabka ee ku burburtay Pakistan
Akhriso: Wararkii ugu dambeeyay ee maalinta Koowaad ee Ciidul Fidriga